Ihe ịrịba ama 25 nwere ike ịnwe nsogbu ịde blọgụ | Martech Zone
Saturday, April 14, 2007 Satọde, Febụwarị 18, 2017 Douglas Karr
Mmụọ nsọ site BittBox si kediegwu post, M kpebiri na m dee onwe m post banyere m ịde blọgụ nsogbu. Nke a bụ ihe ịrịba ama m 25 nke ị nwere ike ịnwe nsogbu ịde blọgụ.
Ezigbo ndị enyi gị maara ụzọ kachasị mfe iji gwa gị okwu bụ site na ịza ajụjụ.
Na-ahazikwa ụlọ ime ụlọ gị ka ịnweta kọmputa nke ọma.
Iji zaa ajụjụ ụfọdụ, ị ga-achọ mgbe ụfọdụ na blọgụ nke gị.
Na-edegara ezinụlọ gị akwụkwọ ozi kama ịgwa ha okwu.
Kwụ ụgwọ DSL ma ọ bụ USB gị tupu ego ụlọ gị.
Imaghi ncheta gi ma gi mara nke gi Teknụzụ okwa
Ighapu keyboard gi ga enyere ndi nyocha nyocha banyere ihe ị nwere maka nri abalị maka onwa isii gara aga.
Mgbe ị na-enweghị ike ịchọpụta otu esi gbanwee isiokwu gị, ị dee nke gị WordPress ngwa mgbakwunye.
Found chọpụtara na Anna Nicole Smith nwụrụ n'ịntanetị.
Obi ruru gị ala site na WordPress 2.1 autosave atụmatụ n'ihi na ị nwere ike imecha ime ụlọ ịwụ ahụ oge izipu.
Host na-akwado blọọgụ maka ndị enyi, ezinụlọ, na ndị ọrụ ibe.
Buy na-azụta ngalaba aha maka onyinye.
ị nwere a ọtụtụ of enyi na ị nweela mgbe n'ezie zutere ma ọ bụ ekwu okwu na in ezigbo ndụ.
Ron na-aghọta acronyms dị ka IMHO
Ask na-arịọ maka Herman Miller Aeron maka ncheta ọmụmụ gị.
Chọta onwe gị ịchọ ihe iPhone n'agbanyeghị na ịnwetụbeghị Mac na ndụ gị.
Mgbe a jụrụ gị ihe ịchọrọ maka nri abalị, ị nwere ike ikwu na a ụlọ oriri na ọ restaurantụ inụ na Vancouver si John Chow - mana ị bi na Indiana.
Ọ bụla blog na-enweghị kwuru eme nzuzu… ma e wezụga n'ihi Blog Seth.
Ị mara Ze na-akpa ọchị, Hugh na-adọta nnukwu ihe ọchị na kaadị azụmahịa, na Mark bụ n'ezie, n'ezie kechioma na ya mbụ azụmahịa.
Know maara na okwu ọ bụla sitere na saịtị na-agwụ na "ozi" bụ spam blog.
Na-atụ anya isiokwu ọhụrụ karịa ịkwaga n'ụlọ ọhụrụ gị.
Nwere nsogbu ihi ụra na-enweghị ikenye.
Only na-anọ n'ụlọ nkwari akụ na brọdband ma ọ bụ jiri Starbucks n'ime ụlọ 3.
Na-egosipụta onwe gị dị ka onye na-ede blọgụ kama ịbụ ezigbo ọrụ ị na-ebi.
Tụ oriri abalị gụnyere ctrl-t na ịbanye na Papa John.
Tags: ịde blọgụọchịihe ịrịba ama
Ndepụta dị egwu mana achọtara m ntụpọ di na nwunye.
Mgbaghara mbụ dị na # 13 dịka ọ bụ ezie na anyị enwetabeghị ihu na ihu, anyị ekwuola ọtụtụ oge olu.
# 16, n'ezie ị nwere Mac, ya mere nke a anaghị emetụta gị 🙂
Ma # 20, M n'ezie natara kwuru si .info na saịtị ahụ bụ n'ezie bụghị blog spam…
# 23, ọ bụghị nkwarụ mana achọtala m ụfọdụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ iji nwee brọdband na-eje ozi Starbucks n'ọnụ ụlọ ogologo ma ọ bụ na mpaghara ha nwere donuts n'efu
Ntụpọ? Ọ bụ satire! I choro ima nma di nma, Sean. 🙂
Enwere m ihe ọchị ọchị Doug… hehe… donuts na Starbucks n'otu ahịrịokwu? C'mon ugbu a, nke ahụ bụ ihe ọchị 🙂
Phew! Daalụ maka njikọ na # 13, ọ bụ ezie na m ruru eru maka ndị ọzọ.
Ikpe ikpe? Mgbe nke a ruru m faili ntanetịime - echere m, "uh-oh… E jidere m." Mgbe m gụsịrị akwụkwọ ahụ, ị ​​maara m oge niile :-)
Daalụ maka chuckle (na ọbụbụenyi).
Ọ dị mwute ọtụtụ n'ime ndị a metụtara ndụ m…
# 26: write dee anatara kpọmkwem na Link-bait ndị ọzọ na-ede blọgụ n'ime njikọ gị 🙂
N'ezie, Kiltak! 🙂
9 n'ime 25 maka m… a ka ga-enwerịrị olileanya.
Ga-ahụ onwe gị ịchọrọ iPhone n’agbanyeghi na ị nwebeghị Mac na ndụ gị.
Nke ahụ bụ ihe na-erughị ịbụ onye na-ede blọgụ na ihe gbasara ịta ahụhụ site na Applemarketingbug dị egwu. (Ihu ọma, oge ọ bụla Steve Jobs na-eme ihe ngosi, naanị nwere inwe ya. Maka ndị editọ: taa Apple ga-ekpughere ndị ọhụrụ Final Cut Pro. 🙂
# 27 ịlele blog gị maka nkwupụta ọtụtụ oge karịa ekwentị gị
# 28 ị maara ụdị mbipụta nke Word Press bụ nke kachasị ugbu a. Ma ọ bụrụ na ị na-agba blọọgụ gị na nsụgharị ochie, ị nwere ike ịrụ ụka maka nkeji oge ihe kpatara why
Nwee ezigbo sunday, enyi m nke ọma 🙂
* Na-achị ọchị n'olu dara ụda, na-eche ka iwu ole a si dị na m
# 27 bụ eziokwu zuru oke na m! Na na na!
# 29 ị dị ka otu n'ime ndị na - ekwu okwu n'ọtụtụ blọọgụ.
Ezigbo Doug! Nke a bụ ụzọ ọzọ maka gị: Wzọ iri iji mara ma ị bụ onye Blogaholic.
Bloke - nke ahụ dị egwu! Anọ m ọdụ ebe a na-agụ ihe tupu eme ụtụtụ kọfị… oy!
# 30 ọtụtụ posts ma ọ bụ nkwupụta na-abịa n'oge na-amalite na 0
# 31 A ka debanyere aha gị na ndepụta RSS mgbe ọnwa 3 arụghị ọrụ. 🙂
Ọtụtụ n'ime ha metụtara m, ọ bụ baajị m na-eyi iji nganga.
Enwere m ikpe mara ihe gbasara 1/3 nke ndị a! Enwere usoro ihe omume 12 m nwere ike ịdenye aha?
@Thor: N'ezie, Doug nọ na usoro nke ị mepee usoro ihe omume 12 maka nke a mana na ngwa mgbakwunye WordPress n'ihi na ọ ga-adịrị anyị niile ndị riri ahụ mfe 🙂
Ezi Ndekọ Doug, enweghị m ike ikwenye na igwefoto dị n'ụlọ m! A na-enyocha m na m na-agwa gị!
Mara mma, Doug. Ọ ga-abụ ọbụna na-atọ ọchị ma ọ bụrụ na ọ kụrụ nso n'ụlọ.
N'ihi ya, ọ dị mma. N'ihi ya, na na.
Anaghị m ede ya, Abụ m LOL !!!
M gafere. Iri na atọ n'ime 25 adịghị emetụta m 🙂
Nov 16, 2009 na 5:41 AM
Anọ m na-achọ saịtị nke na-agwa 'ọtụtụ ihe banyere ịde blọgụ ma hụ saịtị a, enwere m obi ụtọ ịgụ 25problems na m ga-agba mbọ izere nsogbu ahụ ma ghara ịhụ ihe ga-eme ..
daalụ ụmụ okorobịa